Chọọchị Turing - WRSP
URBỌCH CH TIMEBỌCHLINE
1957: A mụrụ Giulio Prisco Church Turing Church na Naples, Italy.
1998: E hiwere Transtù Transhumanist Worldwa.
2002: Prisco sonyeere Board of Directors of the World Transhumanist Association.
2004: E hiwere Institute for Ethics and Emerging Technologies, yana Prisco na-eje ozi na Board of Directors.
2008 (June 14): Nzukọ mbụ nke Order nke Cosmic Engineers emere na Silvermoon obodo na egwuregwu ịntanetị. World nke Warcraft.
2008 (July 20): Nzukọ nke abụọ nke Order of Cosmic Engineers emere na Terasem Amphitheater na Second Life.
2009: Prisco rụkọtara ọrụ na Ben Goertzel na ịmepụta Mmebi Iri Mmadụ iri.
2010 (October 1): Prisco nyere ngosi banyere Chọọchị Turing na Nzukọ Transhumanism na nke Ime Mmụọ.
2010 (November 20): Ejiri 1 Workshop Church Online Online Workshop.
2011: E hiwere otu òtù Facebook na Turing.
2012 (Eprel 6): Prisco gosipụtara Chọọchị Turing na ogbako nke Mormon Transhumanist Association.
2013: Prisco nyere otu isi Onye Agụ Transhumanist.
2018: Akwụkwọ Prisco, Akụkọ ifo nke uringka Turing, e bipụtara.
Amụrụ na Naples, Italy, na 1957, Giulio Prisco [Ihe osise dị n'aka nri] mụrụ ọmụmụ physics na sayensị kọmputa, nwere ọnọdụ njikwa na European Space Agency, wee bụrụ onye ndụmọdụ onwe ha banyere teknụzụ ozi, na-emesi ike na eziokwu mebere na nkwanye ndụ. sistemụ. Na mmalite nke akụkọ ntolite ya, ọ ghọrọ onye ọrụ na Transhumanist Movement zuru ụwa ọnụ, na-abụkarị onye ndu ma ọ bụ ọrụ ndụmọdụ.
Enwere ike ịhụ Churchka Turing ka otu ngalaba nke Transhumanist Movement, ma ọ bụ dịka otu n'ime ndị ga-anọchi ya. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị, injinia, na ọgụgụ isi nyere aka na mmekorita ọha na eze zuru oke nke na-eche na teknụzụ nwere ike gbanwee ụdị mmadụ ka ọ bụrụ ihe ka ukwuu, nke mepere emepe, mbara ụwa, na ọbụna na-adịghị anwụ anwụ. Mkpụrụ nke kụrụ mmegharị a bụ akwụkwọ nke 1989 A Bụ Onye Mfe? site na FM-2030. Emeburu onye ode akwukwo aha ya bu Fereidoun M. Esfandiary mana na ngbanwe mgbanwe okpukperechi nke onwe ya nakweere aha FM-2030 iji nye onwe ya na teknuzu ya na ihu ya dika odi na 2030 si tugharia. Site na nkọwa okwu ọ nwụrụ na 2000 afọ, mana na Transhumanist ka nwere ike ịdị ndụ, n'ihi na edebere ụbụrụ ya na Alcor Life Extension Foundation, nke hiwere na 1972 na ebumnuche nke iji cryonics (kefriza) ma ọ bụ ụzọ teknụzụ ọzọ iji chekwaa ma ọ bụghị ụmụ mmadụ nwụrụ anwụ ruo mgbe sayensị ọgwụ nwere ike ịgwọ ọrịa ha na-egbu ma weghachi ndụ. Na 2011, gaa nke ndị na-eso ụzọ FM-2030, Max More, ghọrọ onye nduzi nke Alcor.
Akụkọ ihe mere eme nke Transhumanism dị mgbagwoju anya, mana ọ kachasị na 1998 E hiwere Transwa Transhumanist Association, [Image dị n'aka nri] ma nwee nzukọ kwa afọ na Netherlands, Sweden, England, German, United States, Canada, Venezuela, na Finland. Ruo oge ụfọdụ, Prisco rụrụ na kọmitii ndị isi ya. Na 2004, E hiwere ulo oru ihe omimi na ihe ohuru putara ihe, ya na ndi ozo di iche dika esi gosi ya aha ya, Prisco bu onye otu ndi isi oche ya. Na 2008, ụwa na-agbanwe agbanwe Htù Transhumanist nakweere aha ọhụrụ, Humanity Plus ma ọ bụ Humanity +, [Image dị n'aka nri] na Natasha Vita-More ghọrọ onye nduzi ya. Ya na Max More abụwo ndị na-eso ụzọ nke FM-2030, dịka ya na-ahazigharị aha ha iji mesie ike na ọdịnihu. Na 2013, ha deziri ihe anthology, Onye Agụ Transhumanist, nke gụnyere isi site na Prisco.
Ihe ga - eme ka ọgbakọ Turing bụrụ ihe ozugbo bụ The Order of Cosmic Injinia, nke Prisco rụrụ ọrụ na - ebido na 2008 ma ọ bụrụ na effectivelyka Turing gara nke ọma mgbe afọ abụọ gachara. Ọ họọrọ Nke abụọ Life dị ka ebe a ga-ekwuwapụta Orderkpụrụ, na nnọkọ ntụgharị, Ọhụụ nke Okpukpe / Okpukpe nke Ọdịnihu, na June 4 na 5, 2008 (Bainbridge 2017: 224-30). N'ime ya Prospectus akwụkwọ, Order kpọrọ onwe ya "enweghị okpukpe mbụ n'ụwa" nke ọ kọwara dị ka:
Mgbe a bịara ịbụ enweghị nkwekọ, nke a bụ isi: anyị anaghị eme, anyị anaghị eme ya chọrọ na, Kwere ihe obula na okwukwe. Kama, dị ka ezigbo mmụọ nke sayensị, anyị chọrọ chọpụta… Ma bụrụ eziokwu na mmụọ nke injinịa, anyị chọrọ wuo ma mepụta. ”Na brọgụ 2008, Prisco rụrụ ụka ihe okwu ahụ pụtara okpukpe: “Ọ bụrụ na akọwapụtara okpukpe 'na-achọ ịchọta transcence na eziokwu, pụtara na ebumnuche', mgbe ahụ ka m dị nkwadobe na njikere ịnabata akara' okpukpe '. Achọrọ m ịchọta ihe ọ pụtara na transcendence site na usoro sayensị na, ọ bụrụ na achọghị m chọta ọ, achọrọ m -ewu ya.
Iwu nke injinia Cosmic jiri ụwa mebere n'ịntanetị mara mma, ma nwee nzukọ mbụ ya nke June 14, 2008, na Silvermoon na egwuregwu ịntanetị. World nke Warcraft. Ọnọdụ ahụ bụ obodo nwere akụkụ ọdịnihu nke ndị Horde, yabụ onye ọ bụla sonyere na-anọchite anya Horde. A kwadoro nzukọ nke abụọ nke Order ahụ na July 20 nke afọ ahụ site n'aka Martine Rothblatt, onye ndu na ụlọ ọrụ biopharmaceutical na-akwado maka ikike transgender, onye mepụtara otu Transhumanist aha ya bụ Terasem. N’afọ ndị gafeworonụ, enwere ọtụtụ nzukọ metụtara Nzukọ-nsọ ​​Turing n’ụlọ ọrụ Terasem na ụwa egwuregwu na-abụghị egwuregwu, Ndụ nke Abụọ.
Onye prọfesọ na-amụ banyere okpukpe, bụ́ Robert M. Geraci (2010: 86) na-ekwu banyere akwụkwọ ndị e dere ụbọchị ole na ole tupu Chọọchị Turing ahụ pụta, kwuru, sị: “N’ihi nkà na ụzụ na-aga n’ihu, Prisco kwenyere na nkwa ndị anwụghị anwụ na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ ga-agbanwe n’oge na-adịghị anya ga-asọ mpi. ya na okpukpe ndị e guzobere mgbe ọ na-ebu ibu nke ịkpọasị na ime ihe ike ndị o kwenyere na okpukpe ndị dị otú ahụ bu. ” N'ihe dị ka afọ 2004, Prisco nọ na-ede blọgụ gbasara "injinịa", na na 2011 bipụtara otu isiokwu aha "Transcendent Engineering" na Terasem Akwukwo nke ndi mmadu mara banyere ya. Mgbe o kwuru okwu na 2012 na nnọkọ nke njikọ nke Mormon Transhumanist, ọ mụbara karịa ma guzosiri ike n'ihe nkwupụta 2004 ya.
Ikekwe nkwupụta ihu ọha zuru oke nke Turing Church, ma ọ bụ otu ihe nke Ozizi Elu Ugwu, bụ ihe ngosi Prisco mere site na usoro vidiyo vidiyo desktọọpụ si Italytali gaa nzukọ Utah, Transhumanism na Ime Mmụọ, October 1, 2010. Aha ya bụ “The Cosmic Visions of the Turing Church,” nke ihe odide ya na-ekwu “ga-abụ okpukpe atọ, n’enweghị ozizi bụ́ isi, nke e ji amakarị mmasị ná ala e kwere ná nkwa ebe sayensị na okpukpe na-ezukọ, sayensị aghọọ okpukpe, okpukpe na-aghọkwa sayensị. ” O hotara ụkpụrụ abụọ dị mkpa nke ndị na-ede akụkọ ifo kwuru na ha nwere ike ịdaba n'okike na ike karịrị nke mmadụ: (1) “Achọpụtaghị teknụzụ ọ bụla zuru oke nke ukwuu na anwansi. - Iwu nke Atọ nke Sir Arthur C. Clarke. ” (2) “Enwere ọtụtụ ihe n’eluigwe na ụwa, Horatio, karịa ka a tụrụ anya na ị ga-eche na nkà ihe ọmụma gị. - William Shakespeare, Hamlet. ”
N'ime ọtụtụ blọọgụ na ọnụọgụ dị iche iche nke blọọgụ na ihe ndị ọzọ Prisco dere na ntanetị kemgbe ọtụtụ afọ, ọkachasị mkpa bụ ụbọchị Machị 23, 2012, nke na-abụghị akụkọ banyere enyi ya na onye ọrụ ibe ya bụ Fred Chamberlain, onye ya na nwunye ya bụ Linda hiwere Alcor. Aha ya bụ, “Izizi, Fred, ị ga-ahụkwa,” ọ malitere na ozi ọma bụ na Fred “mere ka ụbụrụ ya banye na cryostasis na Alcor Life Extension Foundation dị na Scottsdale.” Na nkwenye zuru oke, o hotara mkpọsa Linda: "Ọtụtụ ndị enyi ga-atụ uche ọnụnọ ya, ya na ndị ezinụlọ ya họọrọ ruo mgbe teknụzụ ga-enye anyị ohere ịmatakwu n'ọdịnihu. Ewezuga olile anya ahụ, blọọgụ ahụ jikọtara onye na - agụ ya na usoro pọdkastị metụtara Terasem Fred na Linda mere tupu afọ ahụ, wee si otu a mee ka ụdị anwụghị anwụ dị iche iche nye Fred, ịmara ọha mmadụ gbasara echiche ya na ihe ndị ọ rụzuru.
Ndị otu ya na-akọwa Facebook: “Churchlọ ụka Turing bụ ọgbakọ na-arụ ọrụ na mkparịta ụka sayensị na okpukpe. Ikpori okpukperechi, ịkọwa sayensị, ịmụrụ anya na teknụzụ. ”Kama inwe otu usoro nkwenkwe a kapịrị ọnụ, Chọọchị Turing bụ nyocha nke ohere. Ebe nrụọrụ weebụ ya chịkọtara olileanya ya:
Anyị ga-aga na kpakpando ahụ ma chọta Chukwu, wuo Chukwu, bụrụ Chukwu, ma kpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ site n'oge gara aga site na sayensị dị elu, injin na mbara oge na 'oge anwansi.' Chineke na-apụta site na obodo ụdị ndụ dị elu na mmepeanya dị na ụwa niile, ma nwee ike imetụta ihe omume oge ọ bụla, oge ọbụla, gụnyere ebe a ma ugbu a. Chineke buliri ịhụnanya na ọmịiko elu nke ike ndị isi, ndị ọkwọ ụgbọ ala maka mmalite nke eluigwe na ụwa.
Echiche dị omimi a na-etinye Chineke n'ọdịnihu, karịa oge gara aga. Ọ gbasiri ike na 2009 mgbe Prisco rụkọtara ọrụ na Ben Goertzel, onye na-ewepụta ihe na robotics na ọgụgụ isi, na ịzụlite ikpe iri nke Cosmist.
Yiri Iwu iri, mana egosipụtara dịka amụma iri, ndị Convictions nwere ezigbo atụmanya na ebumnuche. Abụọ anọ n’ime ha metụtara mmepe-nso nso metụtara ọrụ nke uringka Turing: (1) ansmụ mmadụ ga-ejikọ na teknụzụ, na-amụba n’ike n’ike. (2) Anyị ga-azụlite teknụzụ AI na teknụzụ na-ebugote uche. (3) Anyị ga-agbasa na kpakpando ma gagharị ụwa. (4) Anyị ga - azụlite mmekọrịta na - arụ ọrụ mmekọrịta (ụwa mebere) nwere ike ịkwado ikike.
Prisco arụ ọrụ nke ọtụtụ ndị sayensị mbụ na ndị ọkà ihe ọmụma, na akwụkwọ ya Akụkọ ifo nke uringka Turing kwuru okwu atọ kwesịrị ịtụle ebe a. Onye guzobere Churchka Turing nwere ọdịbendị ọdịnala Roman Katọlik, wee hụ njikọ siri ike n'etiti nkà ihe ọmụma nke ọkà mmụta sayensị na onye ụkọchukwu Jesuit, Pierre Teilhard de Chardin, na Transhumanism nke metụtara mmụọ. Iji maa atụ, na Nkpughe 1: 8, Akwụkwọ Nsọ hotara Chineke: “Abụ m Alfa na Omega, mbido na ọgwugwu, ka Onye-nwe kwuru, nke bụ, ma ọ bụ nke bịara, ma nke ga-abịa, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.” Teilhard de Chardin (1964) yigharịrị oge dị anya n'ọdịnihu, “omega,” mgbe Chukwu na mmadụ ga-ezukọ. Sayensị akpọlitela ajụjụ gbasara ma Chukwu ejiri ọfụma rụọ ọrụ Alfa nke ike eluigwe na ụwa, mana Prisco na-atụ aro na Chukwu nwere ike ịje ozi Omega, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọta ma ọ bụ mepụta chi ahụ.
Njikọ ọdịnala mara nke abụọ bụ aha ya, uringka Turing. Ya na-enweta site na akụkọ nzuko-nsọ nke Churchka, ụkpụrụ ụkpụrụ dị na mgbakọ na mwepụ na sayensị kọmputa, nke ndị ọkà mmụta mgbakọ na mwepụ abụọ, Alonzo Church na Alan Turing mepụtara. Ihe onyonyo dị n'aka nri] usoro nkọwapụta usoro ana - achọpụta nsonaazụ site na usoro nke usoro mgbanwe siri ike, dịka usoro dị na programmụ kọmputa. N’ime usoro okpukperechi, ihe gbasara ụka-Churchlọ-ụka na-enye echiche na ọ bụrụ na Chineke adịghị, naanị ụzọ iji mepụta Chukwu bụ site n’inyocha ihe omimi sayensị na injinị injin, ikekwe n’ime kọmputa. Nke a yiri ka ọ ga - agọnarị ohere ịdị adị nke ihe dị adị, ma aghaghi iburu n'uche na nyocha nke ugbu a na igwe nchịkọta ga - agbanahụ akụkọ banyere Chọọchị, n'agbanyeghị na anyị amabeghị ihe banyere ụdị nnabata a.
Mmetụta ọdịnala nke atọ, nke Prisco na - ejikọ na njikọ nke Cosmist nke Russia iji wulite oghere mbara, etolitela n'ime ngagharị n'ozuzu na-achọ ka ọ bụrụ nke teknụzụ, chọrọ njigide nke ụyọkọ kpakpando na mmepe nke ihe ndị dị ndụ ma ọ bụ usoro iji nweta anwụ anwụ.
Kama ijigide ofufe ofufe n'ime ụlọ anụ ahụ, itinye ezi ndị kwere ekwe n'otu ebe a na-ahụ anya, uringka Turing na-ama ụma agakwuru ndị ọzọ yiri ya, na-enwe nzukọ ntanetị iji kwurịta isiokwu ndị metụtara ibe ha, na ịmepụta usoro nkwukọrịta sara mbara. Kama ịtụ anya na onye otu ọ bụla na-eme ihe omume okpukpe mgbe niile, dị ka ekpere, a na-agba ndị mmadụ ume inyocha ọgụgụ isi, ime mmụọ na ahụmịhe sayensị niile. Yabụ, uringka Turing dị n'ọtụtụ ụzọ na-emegide okwukwe ọdịnala, na-emesi nchọpụta ike karịa ọdịnala, ihe ọhụrụ karịa ịtụgharị. Dịka ọ dị n’okpukpe ọdịnala, inwe mmekọrịta dị mkpa, mana dabere na ọhụkọ ọnụ kama ikwere.
Iji maa atụ, emere nzukọ izizi nke ụlọ ọrụ ntanetị nke Turing Church nke mbụ were awa anọ, November 20, 2010, na Telebile online mepere ebe obibi. Ihe owuwu a dị akụkụ abụọ, ndị mmadụ ise sitere na kọmitii, ihe ngosi yiri ya na nnọkọ agụmakwụkwọ, ndị na-ege ya ntị na-esoro na-esote ya. Prisco gosipụtara ụkpụrụ ndị bụ isi nke uringka Turing, Ben Goertzel kwuru okwu banyere Mansesto Cosmist ha. Atọ ndị ọzọ gosipụtara echiche nke òtù dị iche iche ebe Prisco na-arụkwa ọrụ: Lincoln Cannon (Ngwakọta nke Mormon Transhumanist), Mike Perry (Society for Universal Immortalism) na Martine Rothblatt (Terasem). Emere ihe omumu nke Turing Church Online Workshop 2 na Sọnde, Disemba 11, 2011, ya na ndị ọrụ nhazi akwụkwọ mbụ mbụ ise gbakwunyere asatọ ndị ọzọ. The Turing Church enweghi aha nke Bible, mana vidiyo zuru oke nke ụlọ ọrụ abụọ a ka emere ka ọha na eze nwee ebe nrụọrụ weebụ echekwara. (na-atụgharị weebụsaịtị.com nd) nke jikọtara na weebụsaịtị nke na-esote (weebụsaịtị web.net ụka nd).
Ndị otu Facebook nyefere na Chọọchị Turing, nke nwere ndị otu 860 na mbido Ọgọstụ 2019, na -ekekọrịta akụkọ, mkparịta ụka, na nkwupụta nke nkwenkwe nke mmadụ mgbe ụfọdụ gosipụtara ya dị ka okpukpe ọhụrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na August 2, onye nlekọta Lincoln Cohen depụtara njikọ na isiokwu ọhụrụ nke BBC banyere ọdịnihu nke okpukpe kwuru banyere Tka Turing. Laa azụ na July 16, Prisco ezigala njikọ na blọọgụ na webụsaịtị ụka ahụ, bido "A na m eme ncheta afọ 50 nke Apollo 11 site na mmetụta obi ilu, kamakwa nnukwu atụmanya na olile anya dị elu." N’ọnwa ahụ onye otu na-arụsi ọrụ ike na Ntụgharị uche nke Transcendental ngagharị na naanị nso nso a batara na Chọọchị Turing zipuru njikọ na “nnwale m banyere Iso -zọ Kraịst mmadụ,” Chọọchị Yogic. Mpempe akwụkwọ na-adịkarị na isiokwu nke igwe nyere aka na telepathy jikọtara na ihe ngosi ọ nyere na Mgbakọ Parapsychological na Paris.
Ka tụgharịrị bụ nzukọ mebere nke dị n'ịntanetị, dị ka usoro mkparịta ụka siri ike na-echekwa dị ka vidiyo, mgbe ụfọdụ a na-eme ya na World Life nke abụọ, [Foto dị n'aka nri] na mgbe a na-eduzi ya na usoro mkparịta ụka vidiyo. Ka ọ dị na August 1, 2019, ebe nrụọrụ weebụ maka Turing Church nwere "ndị editọ" atọ, Prisco na ụmụ nwoke abụọ ndị nkọwa ha gosipụtara ma myirịta na iche iche: "Lincoln Cannon bụ onye na-ahụ maka nkà na ụzụ na onye ọkà ihe ọmụma, na onye na-akwado nkwado nke nkà na ụzụ na postsecular okpukpe. ” “Micah Redding - Christian Transhumanism: Okwukwe & sayensị, okpukperechi na teknụzụ, ọdịnihu nke mmadụ. Onye ọbịa nke Podcast Christian Transhumanist Podcast. ” Ndị otu a bụkwa "admins" nke ndị otu Turing Church Facebook, yana Nupur Munshi, onye edemede na-edeghị akwụkwọ na India, na Kathy Wilson, onye omenkà na onye nyocha banyere ahụmịhe ime mmụọ na Utah. Obu ihe kwesiri ntukwasi obi na ndi isi n’ulo uka Turing abughi ndi bishop ma ha bu ndi editọ na ndi admins, dika omenaala intaneti di n’oge a.
Prisco nke October 1, 2010, ọkwa nke uringka Turing kwụsịrị na simu kọmputa nke ihe ịma aka nke ịkpọlite ​​ndị mmadụ site na data banyere ha ebe nchekwa n'oge ndụ, mana ọ nwekwara ike ịme ka ọdịnihu nke Churchka Turing onwe ya. Sọftụwia ahụ bụ nke Egwuregwu nke Ndụ, “cellular automaton” nke onye mgbazịa mgbakọ na mwepụ John Conway chepụtara ma kwupụta ya na 1970 American Scientific edemede site n'aka Martin Gardner, onye na-edekarị akwụkwọ gbasara isiokwu ndị metụtara ofufe. E gosiputara ihe dị ka puku kwuru puku, ka edoziri ya dị ka chessboard, n'ihu kọmputa. Akara akara ụfọdụ, akụkụ dị iche iche maka simulation nke ọ bụla. N'ime usoro dị iche iche, usoro nke algorithms, na-ewepụ ma na-agbakwunye akara, dịka ọmụmaatụ mpaghara ojii ojii n'akụkụ abụọ nke akara agba akara ga-akara akara na oge na-esote, na mpaghara ọ bụla akara akara nwere ndị agbata atọ akara atọ ma ọ bụ karịa. Na nsụgharị Prisco, akara otu nnukwu akụkụ dị nso n'etiti bụ akara akara oghere, ebe sọọsọ akụkụ ya ka akara akara na-enweghị aha. Prisco na-amalite ịme anwansị ahụ, oghere a na-amalite ife efe, mgbe ahụ ọ ga-etisa ka ọ na-abanye n'akụkụ ebe akara akara enweghị akara. N’ihe ngosi ya, Prisco doziri nsogbu ahụ site na i copomi oghere dị na ya ugboro ole na ole n’ime oghere mwepu, na-ekewapụ onyonyo na ibe. Otutu ugbo ala ndi a na efeghari na nchekwa, n'enweghi ihe gha agbagha ihe ha choro rue mgbe ha ruru na elu uwa.
Na nsonaazụ mbụ ya, ịme sọftụ kọmputa ahụ gosipụtara ihe isi ike nke ịchekwa nnukwu usoro ihe ọmụma, dị ka uche mmadụ. Chọọchị Turing na otu ndị metụtara ya arụrịta ụka ugboro ugboro nke teknụzụ dị ugbu a nwere ike ịchekwa omume na ncheta mmadụ mgbe ọ nwụrụ, n'ụzọ dabara adaba maka mbilite n'ọnwụ site na teknụzụ ụfọdụ dị egwu. Ọtụtụ Transhumanists, gụnyere otu Terasem, atụpụtala ijide data banyere onye ahụ na kọmputa na kọmputa, ma ọ bụ site n'ajụjụ, ileba anya na omume, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ eji eme kọmputa. Agbanyeghị, ụzọ dị otu a yiri onye na-etinye nnukwu ego na mgbali site na onye echebere ya, ma ọ bụ nwee oke. Crzọ nkọwasị nke ụbụrụ na-achọ mbọ dị ala site n'aka ndị ọkachamara nọ na Alcor, mana ọ nweghị onye ọ bụla “nwụrụ anwụ” kwụsịrị ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ maka ichekwa ọtụtụ afọ iri. Agbanyeghị, dị ka a na-arụ ụka na Prisco na-ekere òkè na ya, usoro ịkpụcha ma ọ bụ ụzọ ọzọ nwere ike isi mebie obere ihe dị n'ụbụrụ na-anọchi anya uche. Yabụ, otu ihe ịma aka maka Tka Turing bụ nsogbu nke teknụzụ maka ichebe na ime ka mmadụ ghara ịdị n'otu nwere ike ọ gaghị adị ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na, na-enye enweghị olileanya na anwụghị anwụ maka ndị dị ndụ taa.
Thelọ ọrụ ndị mejupụtara General Transhumanist Movement fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị otu obere ma ọ bụ ọbụna ndị mmadụ na-arụ, n'agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ “ndị na-eso ụzọ” n'echiche Internetntanetị. Nke ahụ pụtara na ha agaghị alanarị ndị ndu ha. Ugbu a, echiche na ụdị ngosipụta nke Giulio Prisco edepụtara nke ọma na ọtụtụ narị vidiyo na ederede ederede n'ịntanetị, mana gbasasịrị n'ọtụtụ ebe, nke ọ bụla nwere ike ịkwụsị echi. Chọọchị Turing emebeghị ụlọ nsọ, ma ya fọdụkwa nnukwu katidral, na akụkụ akwụkwọ nsọ ya nile adịkarịghị ụkọ. Yabụ, otu ihe ịma aka maka Tka Turing na "enweghị uche" ndị ọzọ bụ imepụta ebe ndebe ihe na-adịgide adịgide, ikekwe dị ka ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ The Wayback Machine, kamakwa na-etinye ihe ndekọ anụ ahụ nke nwere ike ịdị ọtụtụ narị afọ.
Ntugharị 2010 nke Prisco na-enweta uru pụtara afọ iri ka emesịrị, ebe nkwụsi ike nke New World Order na-abawanye na a na-ajụ ajụjụ, yana gọọmentị nkwado Artificial Intelligence frenzy na-ejikọ pụtara ihe dị iche iche na isi echiche nke uringka Turing. Nke ahụ bụ na mpaghara ọdịnala gbara gburugburu aroundka Turing abụrụla ọgba aghara, nwere ike ime ka ọtụtụ ndị mmadụ chọọ nkwụsi ike na ndụ ha, nke nwere ike ịmasị okpukpe ọdịnala kama imepụta ihe okpukperechi. N'ozuzu ha na Transhumanism bu nkwado onwe onye, ​​nke uche nke ndi ukochukwu nyere n’etiti okpukperechi, na ndi okacha-ara na ndi mmadu. A ga - agharịrị ịhụ ma ndị ụkọchukwu mpaghara ha ga - agbaba n'ime Chọọchị Turing.
Bainbridge, William Sims. 2017. Secularization siri ike. Cham, Switzerland: Mmiri.
FM-2030. 1989. A Bụ Onye Mfe? New York: Warner.
Ugba, Martin. 1970. "Fantastic Combinations nke John Conway's New Solitaire Game 'Ndụ,'” American Scientific 223 (Ọktoba): 120-23.
Geraci, Robert M. 2010. Apọkaliiki AI: ọhụụ nke Eluigwe na Robotics, ọgụgụ isi Artifual na Virtual Reality. New York: Oxford University Press.
Goertzel, Ben. 2010. Ntụgharị uche nke Cosmist: Nkà Mmụta Ọmụma Maka Ọgbọ Ọgbọ. Ndi mmadu + Press.
More, Max, na Natasha Vita-More. 2013. Onye na - agụta Transhumanist: Oge gboo na Nkọwasị nke Akwụkwọ Nsọ na Sayensị, Teknụzụ, na Nkà Mmụta Ọmụmụ nke Ọha Mmadụ. New York: Wiley-Blackwell.
Prisco, Giulio. 2018 Akụkọ ifo nke uringka Turing. Uring na-elekọta Tka.
Prisco, Giulio. 2011. “Injinia nọchiri anya ya,” Akwụkwọ edemede nke Cyberconsciousness 6 (2). E si na http://www.terasemjournals.com/PCJournal/PC0602/prisco.html na 5 August 2019.
Teilhard de Chardin, Pierre. 1964. Ọdịnihu nke Mmadụ. Niu Yọk: Harper.
Uringme ihe webụsaịtị Church (ọhụụ). E si na https://turingchurch.net/ na 3 August 2019.
Site na webụsaịtị websiteka (nke izizi). E enwetara site na turingchurch.com na 3 August 2019.